Bo Bo, Author at Shwe Khit Online TV - Page 18 of 18
WHO က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ COVID-19 နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတိုင်းသိသင့်တဲ့ အချက် (၅) ချက်
April 6, 2020 Bo Bo 0
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံး ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကို ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ မှာ တရားဝင်တွေ့ရှိထားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အခြေအနေတွေဟာ ရှုပ်ထွေးနေပြီး စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတဲ့ ပြည်သူလူထုတွေဟာ လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းများကြောင့် စားစရာသောက်စရာတွေ အလုအယက် ဝယ်ယူနေကြတာကိုလည်း မြင်တွေ့ကြားသိနေရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com ဒီလို လုပ်တာဟာ မှန်လား ? မှားလား ? ဆိုတာထက် ဒီရောဂါနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အခြေခံကျတဲ့ အချက်တွေကိုသိရှိအောင် လေ့လာထားဖို့ က ပိုပြီးအရေးပါ […]
အပြင်မှာအမှန်တကယ်ရှိတဲ့ ဆန်းကြယ်သော စားသောက်ဆိုင်များ
၁။ Dinner In The Sky , Canada ကနေဒါနိုင်ငံ မွန်ထရီရယ်မြို့မှာ ရှိတဲ့ဒီစားသောက်ဆိုင် ဟာဆိုရင်တော့ ပေ (၁၆၀) အမြင့်မှာ ညစာစားနိုင်အောင်လို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ စားပွဲ၊ ကုလားထိုင်တွေကို ကရိန်းနဲ့လေထဲကို ဆွဲတင်ထားလို့ တကယ့်ကို ဆန်းကြယ်ပြီး အသည်းယားဖွယ်ကောင်းတဲ့ ညစာကို သုံးဆောင်လိုသူတွေ သွားရောက်သင့်ပါတယ်။ အပေါ်ရောက်လို့ လိုအပ်တာတွေအတွက်စိတ်မပူ ရအောင် ဝိတ်တာတစ်ယောက်လည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com ၂။ The […]
Covid-19 ဗိုင်းရပ် ကူးစက်ခံရရင် ခံစားရမယ့် ရောဂါလက္ခဏာများ
စတင်ကူးစက်ခံရပြီး ရောဂါလက္ခဏာ ပြဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသလဲ? စတင်ကူးစက်ချိန်ကနေ ရောဂါလက္ခဏာပြဖို့ ၁ ရက်မှ ၁၄ ရက် အထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ အများစုအတွက် ရောဂါလက္ခဏာပြဖို့ ကြာချိန်ကတော့ (၅) ရက်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ကူးစက်ခံရရင်တော့ ရက်စွဲအလိုက် အောက်ပါဝေဒနာတွေကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com စတင်ကူးစက် ခံရပြီး (၁) ရက်မှ (၃) ရက် သာမန်တုပ်ကွေးအဖျားနဲ့ဆင်တူပါတယ်။ အဖျားငွေ့ငွေ့လေးရှိမယ် ။ ခေါင်းနည်းနည်းကိုက်မယ်။ လည်ချောင်းနာမယ်။ အစားအသောက်မပျက်ဘူး ။ […]
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ကူးစက်ခံရတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဆယ်လီ (၁၀) ယောက်
April 5, 2020 Bo Bo 0
တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့ကနေအစပြုခဲ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပိုးဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ပျံ့နှံ့ကူးစက်လျက်ရှိပါတယ်။ COVID-19 လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီကူးစက်ရောဂါကို ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ဖို့တော့ နည်းလမ်းမတွေ့ရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ကူးစက်ခံရတဲ့ လူအတော်များများ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေသာမပြုလုပ်ထားရင်တော့ COVID-19 က ဆင်းရဲချမ်းသာ ၊ ကြီးငယ်မရွေး ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန်အခြေစိုက် နာမည်ကျော် Telegraph သတင်းစာရဲ့ုထုတ်ပြန်မှု တွေအရ ဆိုရင်တော့ နယ်ပယ်အသီးသီးက ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်အတော်များများလည်း ဒီရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်း ခံထားရပါတယ်။ […]
ကမ္ဘာ့အကြမ်းဆုံးနဲ့ အသန်မာဆုံးသော ခွေးကြီးများ
March 20, 2020 Bo Bo 0
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Shwe Khit ပရိသတ်သတ်ကြီးကို ပြောပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြမ်းဆုံးနဲ့ အသန်မာဆုံးလို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ခွေးကြီးတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင် ကြမ်းလို့လဲဆိုရင် တချို့ခွေးကြီးတွေဟာ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ အန္တရာယ်ရှိလို့ မွေးခွင့်မရှိပဲ တားမြစ်ခံထားရတဲ့ အထိပါပဲ…ကဲ ဒါဆိုရင်တော့ ဘယ်အမျိုးအစားတွေ ပါလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်လားဗျာ…. shwekhitonlinetv.com ၁၀။ GREAT DANE Great Dane တွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ခေတ်တွေတုန်းကဆိုရင် သေချာ […]
February 6, 2020 Bo Bo 0
သုနေသန မျိုးစုံကိုပြုလုပ်တေကြတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကတော့ တကယ့်ကို အံ့မခန်းစရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တစ်ချို့အချက်တွေက သာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒါတွေဟာ ဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး လက်ခံနိုင်ဖို့ခက်ခဲမယ့် တွေ့ရှိချက်အကြောင်းအရာမျိုးတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ … ဘယ်လိုအံ့သြစရာအချက်မျိုးတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်နော် …… shwekhitonlinetv.com ၁။ သင်နဲ့ ချွတ်စွပ်တူသူ (၇) ဦး သုတေသန ပြုလုပ်ချက်တွေနဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရတော့ ကမ္ဘာပေါ်ကလူဦးရေ သန်းပေါင်း (၈၀၀၀) နီးပါးထဲမှာ သင်နဲ့ရုပ်ခြင်းချွတ်စွပ်တူတဲ့သူ အနည်းဆုံး (၇) ဦးရှိနိုင်ပြီး၊ […]
နိုင်ငံတကာက ပညာရှင်တွေ တီထွင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ထူးခြားသော ခေတ်လွန်နည်းပညာ ( ၇ ) မျိုး